पुनः सक्रिय हुँदै मनसुन, आज कहाँ कस्तो हुन्छ वर्षा ? – Everest Dainik – News from Nepal
पुनः सक्रिय हुँदै मनसुन, आज कहाँ कस्तो हुन्छ वर्षा ?
काठमाडौं साउन ४ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद्ले आज (शनिबार) देखि मनसुनी गतिविधि बढ्दै गएको बताएका छन्। मौसमविद् शान्ति कँडेलका अनुसार अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै धेरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा पनि बिहानैदेखि पानी पर्न थालेको छ।
‘आज पूर्व र मध्य क्षेत्रका केही स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ,’ विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरोको पनि जोखिम देखिन्छ।’ मौसमविद्का अनुसार बंगालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त हावा भित्रिन थालेकाले नेपालमा मौसम बदली र पानी पर्ने क्रम बढेको हो।
‘मनसुन न्यून चापीय रेखा अहिले नेपालको दक्षिणतिर(भारत)रहे पनि बंगालको खाडीबाट प्रवेश गरेको जलवाष्पयुक्त हावा र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण वर्षाको सम्भावना बढेको हो,’ उनले भनिन्। महाशाखाका अनुसार मनसुन न्यून चापीय रेखा नेपालबाट दक्षिणतर्फ सरेर केही दिनअघि देखि भारतमा रहेकाले मनसुनी गतिविधि कम सक्रिय भएको हो। तर त्यो रेखा १/२ दिनपछि पुनः नेपाल भित्रिने सम्भावना उनको रहेको छ ।
देशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ जसका कारण ती क्षेत्रका पहाडी भू(भागमा पहिरो जान सक्ने र पहाड तथा चुरेबाट बहने खोलाहरुमा जल सहत बढ्न सक्ने भएकोले सामान्य सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिन्छ। -मौमम पूर्वानुमान महाशाखा